Kedu ka ị si enyocha arụmọrụ SEO? 6 Ndụmọdụ ndị isi Semalt
Ngwa nchọta bu anumanu di omimi. Ndị nche ọnụ ụzọ dị ike nke ịntanetị, ha kwesịrị ijide n'aka na ha nyefere naanị ndị kacha mma na nsonaazụ kachasị mma maka ndị ọrụ ha, ka aghara iwepụ ha maka nhọrọ ndị ọzọ.
Iji wepụta nsonaazụ ọchụchọ dị mma dị otú a, onye ọrụ inyocha chọrọ ijide n'aka na ezigbo algọridim ha jiri mee ihe n'ịchọ ọchụchọ ka bụ ihe nzuzo echechiri. E kwuwerị, ọ bụrụ na nzukọ maara usoro ahụ zuru oke ha nwere ike iji ya gbagoro n'usoro.
N'ihe flipside ahụ, igwe ndị na-achọ ihe ga-enyerịrị weebụsaịtị ụfọdụ ihe ga-enyere ha aka ịha ọkwa nke ọma, ma ọ bụghị, onye ọ bụla ga na-emegharị anya. Dịka ịkwe ntanetị ọchụchọ dị ka Google, Yahoo! na Bing ewepụtala usoro nke njikarịcha ihe nchọta nchọta (SEO) — ndepụta nke àgwà websaịtị niile dị elu na-ekerịta.
Ma ọ bụ àgwà ndị a na-etolite ntọala nke nyocha SEO.
Gini mere iji nyochaa nyocha SEO m?
I meela websaịtị. Followed sorola usoro ntọala nke njikarịcha nchọta. Tinyela saịtị gị n'ime mmiri ahụ. Gini mere iji nyocha ihe omume SEO gị?
E nwere isi ihe abụọ.
Nke mbu, ihe omuma bu ike. N’ezie, ị nwere ike wetela weebụsaịtị gị ‘site n’akwụkwọ ahụ’, mana ị maghị n’ezie etu ọ si arụ ọrụ ya ruo mgbe ị nwalere ya. Ọ nwere ike bụrụ na ị buliri weebụsaịtị gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke, mana ndị asọmpi gị jisiri ike mee ka nke ha dịkwuo mma, ị ka nwere ọrụ ị ga-arụ. Site na nyochaa arụmọrụ SEO gị, ị nwere ike ịmata isi ihe nke mmezi, ma gafere ndị asọmpi gị na ọkwa.
Nke abuo, SEO nọ na ọnọdụ mgbanwe mgbe niile. Iji bulie ogo nsonaazụ ha mgbe niile ma nọrọ otu nzọụkwụ n'ihu ebe nrụọrụ weebụ, Google, Yahoo! na Bing na - emegharị algọridim ha oge niile. Nke a pụtara na ihe mere gị jiri nọrọ n'ọkwá dị elu n'izu gara aga nwere ike ọ gaghị ebute gị ebe a. Ọ bụrụ na i jiri omume SEO kachasị mma nke taa tụnyere omume kachasị mma nke afọ 10 ma ọ bụ 15 gara aga, mgbanwe ahụ dị egwu. Ndepụta nke ọhụụ Google algorithm a na- eme ka ọgụgụ na-adọrọ mmasị.
Nyochaa arụmọrụ SEO gị na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dịkwuo mma ma nyere gị aka imeghachi omume maka mgbanwe. Ọ dị mkpa ka onye ọ bụla chọrọ ịrịgo n'ọkwa ọkwa ma nọrọ ebe ahụ.
Yabụ kedu ka inyocha SEO?
Keyzọ 6 isi iji nyochaa arụmọrụ SEO gị
Nkọwa bara uru banyere arụmọrụ gị dị n'isi ụkpụrụ isii bụ isi nke nọgidesiri ike na akụkọ ntolite SEO - njirimara bụ ntọala nke Semalt Analytics. Ka anyị leba anya na nke ọ bụla.
Mgbe onye ọrụ pịnyere otu okwu ma ọ bụ ahịrịokwu n'ime Google, nke a ga - abụ ihe mkpali ga - esochi ọchụchọ ahụ. N’ezie, Google nwere ike inyocha ọnọdụ onye ọrụ ahụ, ma ọ bụ profaịlụ nke onye ha wuru kemgbe ọtụtụ afọ, mana ozi a na-agbakwunye nnu na ose naanị na ọchụchọ ahụ. Isiokwu bụ isi nri.
Mgbe Google tụkwasịrị ụgbụ ya n’elu World Wide Web ka ị na-achọ mkpụrụokwu ndị a, ị ga - enweta ebe nrụọrụ weebụ gị? Knowmara Keywords niile dị mkpa nke weebụsaịtị gị kwesịrị igosipụta ngwaahịa ndị ị na-ere na ụlọ ọrụ ị na-abanye? Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ iwu gbasara iwu na Lọndọn, ị na-egosipụta nsonaazụ n'ihi 'iwu ezinụlọ London'? Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa Pizza na Brooklyn, ị na-egosipụta ya n'ihi 'pizza Brooklyn'? Ndị a bụ ezigbo ihe atụ iji gosipụta echiche; ezigbo nyocha isiokwu na njikarịcha dị omimi karịa.
Nyocha isi okwu na-egosipụta njirimara isiokwu ị kwesịrị ilekwasị anya na ebe ekwesiri itinye ha na weebụsaịtị gị. Pladebe isi okwu na mpaghara visibulu dị elu dị ka isi na metadata ga-ahụ na ngwa nchọta na-ahụ ha.
N'oge gboo nke nyocha ịntanetị, Google na-achọ ụzọ isi mee ka ekwesi ekwenye na nsonaazụ ha rụpụtara. Ha ghọtara na site na ịdabere kpamkpam na mkpụrụokwu ga - ahụ ebe nrụọrụ weebụ ' nchekwa isiokwu ' - na - agbanye isiokwu igodo ebe ọ bụla enwere ike na saịtị ha iji gbagoo elu nke ọkwa ahụ. Ha wee chepụta ụzọ aghụghọ: ha nyochara njikọ.
Echiche ha dị mfe: njikọ ndị ọzọ sitere na mpụga ebe nrụọrụ weebụ, ogo dị elu nke weebụsaịtị ahụ. Ọ bụ ya mere ị na-ahụ mgbe niile Wikipedia na elu nke ọchụchọ - ha anaghị elebara ngwa njikarịcha isiokwu anya, mana dị ka a na-ekwu na isi ihe ntanetị tụkwasịrị obi na ntanetị, ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na-ejikọ aka na Wikipedia oge niile, na-abawanye uru nke saịtị ahụ. . Ọ bụrụ n’ịchọpụtabeghị, M jikọrọ isiokwu Wikipedia na paragraf a dị n’elu.
Buildinglọ njikọ njikọta ọrụ dị mkpa na SEO. Nyochaa njikọ nke weebụsaịtị gị, ma nke dị ma nke mpụga, dị mkpa nghọta iji ghọta 'nsọpụrụ' ebe nrụọrụ weebụ gị dị site na ngwa ọchụchọ. Ọdịnaya na-arụkarị ọrụ dị mkpa iji melite arụmọrụ njikọ gị, dịka ịkwesịrị inye saịtị weebụ ndị ọzọ ezigbo ebumnuche iji jikọta gị.
Kedu ka esi ewu ebe nrụọrụ weebụ gị nke ọma? Ndị ọrụ nchọta na-ezipụ 'crawlers weebụ' nke na-agagharị ịntanetị ma nyochaa ọdịnaya ya. Easedị mfe iji ha chikọta ozi dị mkpa bụ ihe kpatara SEO.
Chee echiche dị ka njem ịzụ ahịa. Maka onye ntanetị dị ka Googlebot , weebụsaịtị nwere nke ọma ga-adị ka ị na-enyocha ụlọ ahịa ọhụụ - echekwara ihe niile, dobe ya nke ọma, ma tinye ya n'ọnọdụ dị mfe nghọta. Weebụsaịtị e wuru nke ọma dịka ịzụ ahịa na ebe a na-ere ụgbọ a-anaghị enwe nzukọ, enweghị aha na ihe ndị tụrụ atụ tụbara ebe niile.
Nchịkọta weebụsaịtị na-elekwasị anya na nkwado nke weebụsaịtị gị. Ọ na - enyere gị aka ịghọta otu mfe web crawler nwere ike isi na saịtị gị iji chọta ozi ọ chọrọ. Ọ na - enye gị ndepụta nke ndozi ị nwere ike ịme iji meziwanye akụrụngwa a.
Egosiputa ahia gi, ama ama na ntụkwasị obi bu ihe aka gi, obughi isite n’uche Google, kama n’anya ndi n’acho ahia.
Nleba anya nke ọma na njiri mara njiri mara ụlọ ọrụ ọnlaịnụ gị - ọ na-ele anya ọ bụghị naanị na ebe nrụọrụ weebụ gị, mana nyocha ndị nchịkọta dị ka Google, Facebook, Trustpilot na Glassdoor, wee nyochaa arụmọrụ dị n'ịntanetị zuru oke. Ọ na - enyere gị aka ịghọta otu esi ele ihe anya dị na mpụga ma gosipụta ụzọ ị nwere ike isi bulie nghọta ahụ. Nghọta ndị a na - enyere gị aka ịzụlite amụma imekọ ihe ọnụ.
Sị na ị ga enweta akara ule 70% na nnwale. N’ezie, ọ bụ ngafe, mana nsonaazụ ya apụtaghị nke ukwuu ruo mgbe ị matara etu ndị ọzọ niile siri mee. N'otu aka ahụ, ị maghị n'ezie ihe nyocha SEO gị pụtara ruo mgbe ị tụlere onwe gị megide ndị asọmpi gị.
Nchịkọta ndị asọmpi na-eji usoro ndị ọzọ dị ka nke elu mee ka ị ghọta otú usoro akaraaka dijitalụ gị na-agbago megide nke ndị asọmpi gị. Ọ na-eleba anya ebe ụlọ ọrụ ndị a nọ ugbu a, yana ihe ha na-eme iji ruo ebe ahụ.
Ma ugbu a gaa nnukwu ihe omume. Ozugbo ị chịkọtara nyocha ndị a niile, oge eruola itinye ihe ọmụma gị n'omume. Ebumnuche kasịnụ nke SEO bụ iji nweta ogo weebụsaịtị gị dị elu na ngwa ọchụchọ maka isiokwu dị mkpa, yabụ ozugbo ị nyochachara nke ọ bụla na-enye aka, ọ bụ oge iji nyochaa nsonaazụ nke mbọ gị.
Ntụle ogo isiokwu dị mma ga-abụ kwa ụbọchị (a na-eme ya kwa ụbọchị) yana ihe zuru oke Ọ ga - eso ọnọdụ gị na ọtụtụ nchọta ọchụchọ, wee nye gị nghọta ịchọrọ iji meziwanye ogo gị. Ọ ga - egosi onwe ya dị ka onye bara uru site na ịkwalite gị n'ọkwá karịa oge.
N'iji nchịkọta Semalt iji lelee arụmọrụ SEO gị
Nchịkọta Semalt na-ewere igbe niile dị n’elu. Nchịkọta ngwa ọrụ nchịkọta ọkwa webmaster, emebela ya ka ọ nye gị nghọta zuru oke banyere ọnọdụ SEO gị dị ugbu a na iji mepụta nghọta na-enweghị isi nke ga-ahụ ka ị na-arị elu ọkwa ọchụchọ maka isi okwu kachasị mkpa.
Nchịkọta Semalt na-arụ ọrụ site na:
Atherchịkọta data mkpokọta
Reportmepụta akụkọ zuru ezu banyere ọnọdụ SEO nke gị na ndị asọmpi gị
Provid na-enye ndepụta nke isiokwu ga-eme ka saịtị gị dịkwuo elu ma nwekwuo okporo ụzọ
Kwado mbọ ị na-agba SEO na ihe nchọta nchọta ise dị iche iche
Na-enyocha ọkwa na ezigbo oge ma na-ebuga akụkọ SEO kwa ụbọchị
Inye onye njikwa nyocha nke onwe ya ka o na-elekọta usoro ahụ dum
Nchịkọta Semalt na-enye gị ozi ahụ. Ihe ị ga-eji nghọta ndị ahụ dị n’aka gị. You nwere ike ime ha na gị onwe gị, ma ọ bụ ịnwere ike ịkpọtụrụ ọkachamara Semalt SEO, onye nwere ike iduzi gị site na itinye ihe ọhụụ a.
Nchọpụta nke igwe na-achọ ihe bụ ọgụ na-aga n'ihu. Ihe mgbaru ọsọ na-agagharị mgbe niile, ndị asọmpi na-achọkwa iru gị. Mana site n’ịghọta iwu nke egwuregwu ahụ, yana site n’iji ngwa eji eme ihe nke n’eme ka ị nweta ihe ịga nke ọma kachasị mma, ị yikarịrị ka ị ga-esi n’agha na-emeri.
Yabụ kedu ihe chere? Ọ bụ n'efu ibido na Semalt Analytics –nwere ike ịgbakwunye weebụsaịtị gị na nyocha PRO ugbu a na akwụghị otu narị, ma chọpụta kpọmkwem otu azụmaahịa gị nwere ike isi nwee ihe ịga nke ọma SEO.